: Maku soo gaarray warka ah in dhowaan sida AK-47-ka loo adeegsan doono nuclear-ka.?+Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
: Maku soo gaarray warka ah in dhowaan sida AK-47-ka loo adeegsan doono nuclear-ka.?+Video
Warkan ayaa ku soo beegamaya xilli hoggaamiye Putin uu baajiyay booqasho uu ku teggi lahaa Faransiiska, kadib markii xukuumadda Paris ay dalbatay in laga wada-hadlo xaaladda Siiriya, iyadoo dhowr maallin un ka hor uu Ruushka xaduudda Poland u daad-gurreeyay gantaallada xambaarra hubka wax gumaada ee nuclear-ka.
War-sidaha reer Ruush ee Znak,ayaa baahiyay in dhammaan shaqaallaha dolwadda loogu baaqay inay ka soo guuraan dalalka shisheeye,iyagoo xitaa iskuullada ka soo wadanaya carruurta yar yar.
Saraakiisha difaaca ee mareykanka ayaa ugu duur-xulay Ruushka in ay dhulka la simi doonaan cadwogooda oo sida ay sheegeen qaska ka wada caalamka.
Laakiin Ruushka oo markiisa jabaawaya ayaa ku dhaartay inuu dhulka soo dhiggi doono haddii diyaaradaha mareykanku ay amar la’antiisa soo gallaan hawada Siiriya ee uu haddaba la sii wareeggayo maamulkeeda.
Mareykanka oo adeegsanaya dowlaha kale ee reer galbeedka iyo xulafaddiisa ayaa daaqadaha ka soo xer-xeray Ruushka, xitaa gollaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa laga dhaleeceeyay hab-dhaqanka Putin.
Maxaa ku soo baxaya, Marka aad darrsato oo aad eegto sida ay wax u socdaan iyo khilaafka faraha ka baxay ee ka dhaxeeya Ruushka iyo Maryekanka?